Naseho ny : 10 jona 2020
Nandao ny korana niarahana tamin'ireto tanora i Doda, dia mba lasa koa i Dera nanaraka avy ato aoriana. Nanindry mandry an'i Dera fa zanak'ilay rangahy nifanena taminy omaly i Doda, ka dia nentin'ny tsindrimandriny ho tody teo aminy tokoa izy. I Doda efa safotra tsy mahatsiaro tena intsony ary maratra no tratrany.
Tao anatin'ny trangan-javatra nampametra-panontaniana ireto tanora rehetra dia nahatsapa izy ireo fa mitaky ankehitriny ny toaka sy rongony nibobohana. Dia samy nifampitantara ny fahoriany teo avy ny tsirairay. Mba mody namorona ny fiantraikan'ny toaka sy rongony taminy koa i Dera mba tsy hiavaka amin'izy rehetra. Gaga nefa ny rehetra fa i Dera ihany no sisa hany nazoto homana.
Naseho ny : 6 jona 2020
Rehefa ela nitanana ny anjara toeran'i Doda tamin'ireo koranan'ny tanora namany vaovao i Dera dia nipoitra ihany i Doda tompon-toerana.
Naseho ny : 5 jona 2020
Voatery tsy maintsy nanaraka ny fanaon'ireto tanora lasa namany tsy fidiny sy tsy nahafahany niala hatramin'ny farany i Dera : nisotro, nifoka, nandihy, nihinana. Noheverin'ireto namana vaovao aminy, ho ilay anankiray amin'ireo niara-nihira tamin'izy ireo i Dera ka tsy hita elaela, i Doda no anarany. Dia nitana ny anjara toeran'i Doda hatramin'ny farany i Dera teo.
Pejy 6 amin'ny 58